को जनता ? के हो नागरिक समाज ? ~ Thinksphere
12:49 AM Political Commentaries No comments
हुन त निरंकुश राजतन्त्रमा समेत राजा र भारदारहरूले जनताकै नाम भजाउँथे । पहिले प्रजा भने, पछि प्यारा दाजुभाइ–दिदीबहिनी भने । लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरू प्राय: पहिले राजाका प्रजा थिए । आममानिसहरू लोकतन्त्रमा सत्ता सञ्चालक बनेपछि जनता शब्द उच्चारण नगरी कुनै पनि नेताको बोली टुंगिँदैन ।